China 2000mm Mig welding robhoti ine Megmeet Ehave CM 350AR Mugadziri uye Mutengesi |Yunhua
Yooheart robhoti iri pamusoro 3 robhoti mhando muChina, iri 2000mm ruoko kureba MIG welding robhoti iri kureruka uremu dhizaini, compact chimiro, hombe yebasa nzvimbo, inokurumidza dynamic mhinduro, yakagadzikana uye yakavimbika kuita.Kumisikidza kuri nyore, kunotora nzvimbo shoma uye kusangana nezvinodiwa zvekugadzirwa kunoshanduka.
Zvimiro zviri pasi apa:
-arc yekutevera, yekutevera yekuona, laser yekutevera inowanikwa.
Welder torch:Tochi yekutonhodza gasi
Yakakura Kusvika Mig Welding Robot
2000mm ruoko kureba Robot ndiyo yedu yakakura kusvika Mig welding robhoti.Uye kutengeswa zvakanaka kwazvo kunyanya muEurope
nekuti yakakura kureba, compact chimiro uye kuita kwakagadzikana.Iyi Mig welding robhoti inogona kushandiswa
bhasikoro accessories, zvemagetsi mota accessories, magadhi, michina yekurima, mainjiniya enjiniya,
midziyo yefenicha, zvikamu zvemotokari, zvigaro zvemotokari, midziyo yemitambo, midziyo yekurapa.
Yooheart Robot zvinhurobhoti welding maoko izvo zvinogona kupa zvisingagoneke kudzokorora kuburitsa anowirirana uye emhando yepamusoro welds.Yeduwelding marobhoti ari kutengeswa kubatsira kuwedzera kushanda uye kuderedza nguva yekutenderera.Kushandisaotomatiki welding masisitimu uye maitiro inokubvumira kutema pamitengo yakananga yebasa pamwe nekuchengetedza zvinhu.EVS inogona kugadzirisarobotic welding systemskuenderana nezvinodiwa nemutengi wega wega.Tinemig welding marobhoti, arc welding marobhoti,uyeCNC welding marobhoti izvo zvese ISO uye CE Certified.Sarudza Yooheart 'premium-mhando welding maoko uye isu tichaona kushanda kwemaitiro ako ekugadzira.
0-45 ℃ 20-80%RH(Hapana forsting)
Max kumhanya J1
Industrial robotics ruoko welding Hunhu uye Zvishandiso
Robotic welding weld seam performance
Industrial robhoti application show
1, HY1006A-200 iCompact dhizaini, yakareruka, diki saizi, yakakura kusvika uye inonyanya kushandiswa kuMig welding robhoti.
2, Inosanganisira ese mabhegi ekukuchidzira, hurongwa huri nyore, uye kuita kwakanaka.
3, High presicion, uye kuiswa pasi, sirin'i uye kumadziro
1, Yakagadzikana arc mune yakazara ikozvino uye yakaderera spatters, ive yakakodzera kune akasiyana welding maitiro;
2, Yakanyanya kunyura arc uye kupinza kwakasimba, 20% yakaderera pane mimwe michina mukupisa kupisa;
3, Yakanakisa Gap-bhiriji kugona uye kushoma kunzwisisika mukuwedzera waya;
4, Welding parameter kukiya uye basa rekuwedzera rinogona kukurumidza kumisikidzwa o control panel pasina mamwe magadzirirwo outsourcing;
1, Welding torch ine diki saizi yakakura kusvika;
2, Torch mutsipa inoshanduka
3, Standard torch ine anti-kudhumhana mudziyo;
4, Gadzirisa akasiyana angle ye torch mutsipa
1, Kubudirira Kwebasa uye Kubudirira;
2, Cable Length Muripo, Kunyanya Kuvimbika;
3, Heavy Duty Drive Motor ine Tachometer Control
Zvese zvikamu zveChinese
Zviri nyore kuchengetedza
High kumhanya uye kugadzikana chaiko nzira welding mhinduro
YOO HEART Robot ndiye mutengesi wedu wepamusoro, kana chikamu chako chebasa chisina kuoma, iyi nzvimbo yekushanda ichakubatsira iwe kukurumidzira kugadzirwa kwako.Ichi chiteshi chinosanganisira imwe 6 axis welding robhoti, welding magetsi sosi, imwe axis chinzvimbo uye zvimwe zvinobatsira zvepaperipheral.Kana uchinge wagamuchira chikwata ichi, robhoti rinogona kushanda mushure mokunge mapulagi ese mukati. Tinogonawo kukupa mabhanhire akareruka kuitira kuti iwe ugone kukwana chikamu chebasa chakatsiga uye nekukurumidza.
Wese mutengi anofanira kuziva YOOHEART robhoti yakanaka vasati vatenga.Kana vatengi vaine imwe YOOHEART robhoti, mushandi wavo achave ne3-5 mazuva emahara kudzidziswa muYOOHEART fekitori.Pachange paine wechat group kana whatsapp group, ma technician edu ano shanda after sale service, magetsi, hard ware, software etc. anenge arimo. Kana dambudziko rimwechete rikaitika kaviri, technician wedu anoenda kucustomer company kunogadzirisa dambudziko. .
Yese yeYooheart robhoti ichazara Yakanyatso kutevedzera zvinodiwa kunze kwekurongedza.
Q. Robhoti inogona sei kutaurirana nemumwe?
A. Marobhoti maviri anogona kutaurirana kuburikidza ne ether net uye 485. Unogona kusarudza mupendero yekudzidzisa zvakananga, zvakanyorwa muhurongwa usati wasununguka.
Q. Ungabatanidza torch yakachena chiteshi chako chekushanda?
A. Ndicho chinhu chaunosarudza, kana uchida, tinogona kukugadziridza.
Q. Ndingaziva sei kuti nzvimbo yako yekushanda yakanaka kana kuti kwete?
A. Zvakanaka kuti uuye kufekitari yako kuti uzvionere uye uedze chiteshi chekushanda wega.Chaizvoizvo, nzira iyi yakanakira isu tese, isu tinokuzivai zviri nani uye munotiziva zviri nani.
Q. Vashandi vangu vanogona kuramba vari kambani yenyu yekudzidziswa?
A. Izvo zvakanaka, kudzidziswa mufekitari yedu ndeyemahara, iwe unongoda kubhadharisa yako pekugara.
Q. Ungandipa here mutengo unokosha wekutanga chiteshi?
A. Tinogona kutaura pamusoro peizvi.
Zvakapfuura: Factory source China Automated Robot Welding Station for Auto Parts Aluminium Alloy Battery Case
Zvinotevera: Tsanangudzo yepamusoro China Six Axis 6kg TIG Robotic Welding Mini Robot Arm 6 Axis Automatic Machine Industrial Robot Arm ine 24 Mwedzi Warranty CE
high quality Chinese robhoti